Wararka Maanta: Sabti, Apr 23, 2022-Guddiga Hirgelinta Doorashada Jubbaland oo Maanta soo gabagabeeyay Dorashada kuraastii ku dhineyd Jubbaland
Kursiga koowaad ee doorashadiisa Maanta la qabtay ayaa ah HOP 122, waxaana ku tartamay Musharaxiinta kala ah Mursal Maxamed Khaliif iyo Cumar Muxumed Buulle, waxaana kusoo baxay doorashada kursiga Mursal Maxamed Khaliif.
Doorashada kursiga HOP 122, waxaa goobta ay ka dhaceysay ku sugnaa madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland.
Kursiga labaad ee sumadiisu tauay HOP 110, waxaa kuwada tartamayay musharaxiinta kala ah Maxamed Muxumed Maxamed iyo Khadar Axmed Adan, waxaana ku guuleystay kursiga Maxamed Muxumed Maxamed.
Kursiga sadaxaad ee HOP131 waxaa ku tartamay Axmdd Cismaan Ibraahin iyo Aadan Gaarane Cabdullaahi, waxaana kusoo baxay kursiga sida guddiga doorashada Jubbaland ay shaaciyeen Axmed Cismaan Ibraahin.
Kursiga afaraad oo tirsigiisu yahay HOP123 ayaa waxaa ku tartamay Musharaxiinta kala ah Faadumo Faarax Aadan iyo musharax Sacdiyo Cabdullaahi Shire, waxaana ku guulaysatay tartanka kursiga Faadumo Faarax Aadan.
Kursiga shanaad oo ahaa kursiga ugu dambeeyay doorashada Maanta ka dhacday Ceelwaaq oo tirsigiisu yahay HOP125, waxaa kusoo baxay Cabdirashiid Maxamed Ducaale, kadib markii uu tanaasulay Maxamed Aadan Xasan oo la tartami ahaa.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ayaa doorashada kadib waxa uu sheegay iney Maanta soo gabagabeeyeen doorashooyinkii kuraasta ku harasaneyd Jubbaland, isagoona u rajeeyay shacabka Soomaaliyeed Baarlamaan wanaagsan iyo dowlad ku dhisan Cadaalad.
4/23/2022 1:17 PM EST